Maleeshiyadka TPLF oo sheegtay in ay qabsadeen magaalada istiraatiijiga ah Dessie ee gobolka Amhara ee dalkaasi Ethiopia. | Dayniile.com
Home Warkii Maleeshiyadka TPLF oo sheegtay in ay qabsadeen magaalada istiraatiijiga ah Dessie ee...
Maleeshiyadka TPLF oo sheegtay in ay qabsadeen magaalada istiraatiijiga ah Dessie ee gobolka Amhara ee dalkaasi Ethiopia.
Afhayeenka dowladda Ethiopia, Legesse Tulu, ayaan ka jawaabin codsi ah in uu sheegashada TPLF ka hadlo. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay warisay in aysan xaqiijin karin sheegashada TPLF.
Previous articleDowladda UK oo Soomaaliya u soo diraysa saraakiil ka qayb qaata tababarka ciidamadda.
Next articleXiisad Diblumaasiyadeed oo ka dhex qaraxday Saudi Arabia Iyo Lebanon
Nooca cusub ee xanuunka ee COVID-19 ayaa si xowli ah ugu faafaya qaaradda Yurub, maalmo kadib markii saynisyahanno u dhashay waddanka South Africa ay...
Guddoomiyaha jaaliyadaha Soomaalida Netherland oo ugu baaqay Soomaalida ku dhaqan NL...